ခွံစညျးရိုးကြျောကာNLD အလံကို ဖွုတျပွီး မွောငျးထဲ လှငျ့ပဈသှားတဲ့ ကိစ်စ ပနျဆယျလိုပွောပွီ – Sport Gaber
ခြံစည်းရိုးကျော်ပြီး အလံကိုဖြုတ်ကာ မြောင်းထဲ လွင့်ပစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းကို Liveလွင့်ပြီး ပြောပြလာတဲ့ ပန်ဆယ်လို ဗီဒီယို
မနက်လေးနာရီခွဲကျော်လောက်ကတည်းက စစ်ဝတ်စုံနဲ့ သုံးယောက် အိမ်ရှေ့မှာ လာစောင့်နေတာပါ။ အိမ်တံခါး ဘဲလ်တီးနေတာပါ။ ဖြစ်ချင်တော့ ကိုယ်က အိပ်ပျော်နေလို့ ၆နာရီထိုးမှ နိုးပါတယ်။ ၈နာရီလောက်မှာ စစ်ဝတ်စုံနဲ့ရော ရဲဝတ်စုံနဲ့ရော ထွေအုပ် စရဖလို့ ထင်ရသူတွေ ထပ်လာတံခါးခေါက်ပါတယ်။ ဖွင့်မပေးတော့ အိမ်ရှေ့က လော်စပီကာနဲ့ အော်ပါတယ်။ မိဘတွေဆင်းတွေ့ကြပါတယ်။ မြို့နယ်မှူးလို့ ဆိုပါတယ်။
အထက်အမိန့်အရ မေးစရာရှိလို့ တွေ့ခွင့်ပေးဖို့ပြောပါတယ်။ ငြင်းဆန်လို့ ပြန်သွားပါတယ်။ ၁၁နာရီလောက်မှာ နောက်တစ်ခေါက်ြ ပန်လာပါတယ်။ မိဘတွေ ထပ်ထွက်တွေ့ပါတယ်။ အဓိကကတော့ စစ်ဆေးစရာရှိလို့ လိုက်ခဲ့ဖို့ ခေါ်တာပါ။ ဘာမှကြိုတင်ပြင်ဆင်မထားတဲ့အတွက် သောက်ရေကအစ ဘာမှမရှိပါဘူး။ ကလေးနဲ့မို့ အခက်အခဲရှိပါတယ်။
ခဏနေတော့ ရုံးက ဝန်ထမ်းညီမတွေ ဟင်းစားလေးဝယ်ပြီး လာပို့ပါတယ်။ အပြန်မှာ ရပ်ကွက်ရုံးက ခေါ်သွားပြီး စစ်ဆေးပါတယ်။ ဝန်ထမ်းရဲ့ Laptop ကို သိမ်းထားလိုက်ပါတယ်။ နေ့လယ်ခင်းမှာ အမြန်ချောပို့က ဝန်ထမ်းလေး ပစ္စည်းလာပို့ပါတယ်။
အပြန်မှာ အရပ်ဝတ်ဆိုင်ကယ်နဲ့လူတစ်ယောက် နောက်ကလိုက်သွားတာ တွေ့ပါတယ်။ ဘာဆက်ဖြစ်တယ်မသိပါ။ အိမ်ရဲ့ မျက်စောင်းထိုးလမ်းထိပ်နဲ့ နောက်ကျောဘက်မှာ အရပ်ဝတ်တွေ ငါးယောက်နဲ့ ဆယ်ယောက်ကြား စောင့်ကြပ်နေပါတယ်။
ဘယ်သူတွေ ဘယ်ဝါတွေမှန်း မသိပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ တစ်ပတ်နှစ်ပတ်တည်းက အာဏာသိမ်းရင် အိမ်ပေါ်တက်ပြီး ဓါးနဲ့ခုတ်မယ်ဆိုတဲ့ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေရှိတဲ့အတွက် အခုအချိန်မှာ ဒီအရပ်ဝတ်တွေ ပတ်လည်ဝိုင်းခံနေရတာ မလုံခြုံပါဘူး။ မနေ့ည ၁၂နာရီလောက်မှာ ခြံကို ခုံခုပြီး တက်ပါတယ်။ ခြံကျော်ဖို့လို့ ထင်ပေမယ့် ခြံကကျော်တက်ဖို့တော့ အနည်းငယ် အဟန့်အတားဖြစ်ပါတယ်။
ခြံတံခါးမှာ ထောင်ထားတဲ့ NLD အလံကို ဖြုတ်ပြီး မြောင်းထဲ လွှင့်ပစ်သွားပါတယ်။ Record တွေ ရှိပါတယ်။ အခုလည်း ဘယ်အချိန်လာဖမ်းမယ်ဆိုတာ မသိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အဆင်သင့်ပြင်ထားပါတယ်။ ရှောင်ပြေးဖို့ အခြေအနေလည်း မရှိသလို စိတ်ကူးလည်း မရှိပါဘူး။
ရင်ဆိုင်ရမှာပါပဲ။ နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ စိတ်ကူးမရှိခဲ့ပါဘူး။ နိုင်ငံသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ Speak Out လုပ်သင့်တယ်ထင်တာကို ပြောခဲ့ပါတယ်။ နိုင်ငံတော်ရဲ့ တည်ဆဲဥပဒေအားလုံးကို လိုက်နာခဲ့ပါတယ်။ အခုအချိန်ထိ ဘယ်ဥပဒေကိုမှ ချိုးဖောက်ခဲ့ခြင်း မရှိပါဘူး။
လက်ခံသည်ဖြစ်စေ၊ လက်မခံသည်ဖြစ်စေ ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့ အခြေအနေတစ်ခုမှာ ဘယ်အစိုးရအုပ်ချုပ်သည်ဖြစ်ပါစေ၊ ရသင့်ရထိုက်တဲ့ နိုင်ငံသားတစ်ယောက်ရဲ့ အခွင့်အရေးမျိုးနဲ့ ဂုဏ်သိက္ခာမျိုးကို ရဖို့ တောင်းဆိုပါတယ်။ တိုင်းပြည်တစ်ခုလုံး တရားမဲ့ပြုကျင့်ခံရတဲ့အချိန်မှာ ဘယ်သူ့ဆီကမှ ဘယ်သူ့ကိုမှ တရားမျှတမှုဆိုတဲ့စကား မပြောလိုပါဘူး။
နေဝင်ညကို ကူးဖြတ်ရဲမှ ရောင်နီသာတဲ့ နေသစ်ကို ရောက်မယ်။ နေဝင်ညကတော့ ထပ်ရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ ရောင်နီသာမဲ့ နေ့သစ်တွေရောက်ရင် ပြန်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်။ မတွေ့နိုင်တော့တဲ့ အခြေအနေမျိုးလည်း ဖြစ်လာရင် ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက် ကြိုတင်နှုတ်ဆက်ပါတယ်။ Good Luck to you all.
Credit . ပန်ဆယ်လို Facebook account
မနကျလေးနာရီခှဲကြျောလောကျကတညျးက စဈဝတျစုံနဲ့ သုံးယောကျ အိမျရှမှေ့ာ လာစောငျ့နတောပါ။ အိမျတံခါး ဘဲလျတီးနတောပါ။ ဖွဈခငျြတော့ ကိုယျက အိပျပြျောနလေို့ ၆နာရီထိုးမှ နိုးပါတယျ။ ၈နာရီလောကျမှာ စဈဝတျစုံနဲ့ရော ရဲဝတျစုံနဲ့ရော ထှအေုပျ စရဖလို့ ထငျရသူတှေ ထပျလာတံခါးခေါကျပါတယျ။ ဖှငျ့မပေးတော့ အိမျရှကေ့ လျောစပီကာနဲ့ အျောပါတယျ။ မိဘတှဆေငျးတှကွေ့ပါတယျ။ မွို့နယျမှူးလို့ ဆိုပါတယျ။
အထကျအမိနျ့အရ မေးစရာရှိလို့ တှခှေ့ငျ့ပေးဖို့ပွောပါတယျ။ ငွငျးဆနျလို့ ပွနျသှားပါတယျ။ ၁၁နာရီလောကျမှာ နောကျတဈခေါကျွပနျလာပါတယျ။ မိဘတှေ ထပျထှကျတှပေ့ါတယျ။ အဓိကကတော့ စဈဆေးစရာရှိလို့ လိုကျခဲ့ဖို့ ချေါတာပါ။ ဘာမှကွိုတငျပွငျဆငျမထားတဲ့အတှကျ သောကျရကေအစ ဘာမှမရှိပါဘူး။ ကလေးနဲ့မို့ အခကျအခဲရှိပါတယျ။
ခဏနတေော့ ရုံးက ဝနျထမျးညီမတှေ ဟငျးစားလေးဝယျပွီး လာပို့ပါတယျ။ အပွနျမှာ ရပျကှကျရုံးက ချေါသှားပွီး စဈဆေးပါတယျ။ ဝနျထမျးရဲ့ Laptop ကို သိမျးထားလိုကျပါတယျ။ နလေ့ယျခငျးမှာ အမွနျခြောပို့က ဝနျထမျးလေး ပစ်စညျးလာပို့ပါတယျ။
အပွနျမှာ အရပျဝတျဆိုငျကယျနဲ့လူတဈယောကျ နောကျကလိုကျသှားတာ တှပေ့ါတယျ။ ဘာဆကျဖွဈတယျမသိပါ။ အိမျရဲ့ မကျြစောငျးထိုးလမျးထိပျနဲ့ နောကျကြောဘကျမှာ အရပျဝတျတှေ ငါးယောကျနဲ့ ဆယျယောကျကွား စောငျ့ကွပျနပေါတယျ။
ဘယျသူတှေ ဘယျဝါတှမှေနျး မသိပါ။ ပွီးခဲ့တဲ့ တဈပတျနှဈပတျတညျးက အာဏာသိမျးရငျ အိမျပျေါတကျပွီး ဓါးနဲ့ခုတျမယျဆိုတဲ့ ခွိမျးခွောကျမှုတှရှေိတဲ့အတှကျ အခုအခြိနျမှာ ဒီအရပျဝတျတှေ ပတျလညျဝိုငျးခံနရေတာ မလုံခွုံပါဘူး။ မနညေ့ ၁၂နာရီလောကျမှာ ခွံကို ခုံခုပွီး တကျပါတယျ။ ခွံကြျောဖို့လို့ ထငျပမေယျ့ ခွံကကြျောတကျဖို့တော့ အနညျးငယျ အဟနျ့အတားဖွဈပါတယျ။
ခွံတံခါးမှာ ထောငျထားတဲ့ NLD အလံကို ဖွုတျပွီး မွောငျးထဲ လှငျ့ပဈသှားပါတယျ။ Record တှေ ရှိပါတယျ။ အခုလညျး ဘယျအခြိနျလာဖမျးမယျဆိုတာ မသိပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ အဆငျသငျ့ပွငျထားပါတယျ။ ရှောငျပွေးဖို့ အခွအေနလေညျး မရှိသလို စိတျကူးလညျး မရှိပါဘူး။
ရငျဆိုငျရမှာပါပဲ။ နိုငျငံရေးသမားတဈယောကျဖွဈဖို့ စိတျကူးမရှိခဲ့ပါဘူး။ နိုငျငံသားတဈယောကျအနနေဲ့ Speak Out လုပျသငျ့တယျထငျတာကို ပွောခဲ့ပါတယျ။ နိုငျငံတျောရဲ့ တညျဆဲဥပဒအေားလုံးကို လိုကျနာခဲ့ပါတယျ။ အခုအခြိနျထိ ဘယျဥပဒကေိုမှ ခြိုးဖောကျခဲ့ခွငျး မရှိပါဘူး။
လကျခံသညျဖွဈစေ၊ လကျမခံသညျဖွဈစေ ဖွဈသှားခဲ့တဲ့ အခွအေနတေဈခုမှာ ဘယျအစိုးရအုပျခြုပျသညျဖွဈပါစေ၊ ရသငျ့ရထိုကျတဲ့ နိုငျငံသားတဈယောကျရဲ့ အခှငျ့အရေးမြိုးနဲ့ ဂုဏျသိက်ခာမြိုးကို ရဖို့ တောငျးဆိုပါတယျ။ တိုငျးပွညျတဈခုလုံး တရားမဲ့ပွုကငျြ့ခံရတဲ့အခြိနျမှာ ဘယျသူ့ဆီကမှ ဘယျသူ့ကိုမှ တရားမြှတမှုဆိုတဲ့စကား မပွောလိုပါဘူး။
နဝေငျညကို ကူးဖွတျရဲမှ ရောငျနီသာတဲ့ နသေဈကို ရောကျမယျ။ နဝေငျညကတော့ ထပျရောကျလာခဲ့ပါပွီ။ ရောငျနီသာမဲ့ နသေ့ဈတှရေောကျရငျ ပွနျဆုံတှကွေ့ပါမယျ။ မတှနေို့ငျတော့တဲ့ အခွအေနမြေိုးလညျး ဖွဈလာရငျ ဖွဈလာနိုငျတဲ့အတှကျ ကွိုတငျနှုတျဆကျပါတယျ။ Good Luck to you all.
Credit . ပနျဆယျလို Facebook account
မွဝတီမငျးကွီးကြောငျးတိုကျ ဆရာတျော ဦးအရိယာဝံသာဘိဝံသကို လူဝတျလဲပွီး ရုံးထုတျ